Amajjii 08, 2018
Godina Horro Guduruu aanaalee garaa garaa keessatti humnoonni kora bittinneessaa bobba’uun sababaa tokko malee dargaggoota dabalatee namoota mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonnii fi maatiin hidhamtootaa nuuf ibsaniiru. Mootummaan namoonni hidhaa jiran ha gadhiisamu jedha, godinaan keenya immoo nama hidhaatti guura. Eenuy akka nu bulchu wallaalle jedhu jiraattonni.
Bakka bu’aa KFO kan godhina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Dagbaas Waaqoyyaa haala gamas jiru ennaa ibsan mootummaan ibsi inni baasu sadarkaa godinaa fi aanaatti ennaa gad bu’u hojiitti hin hiikamu jedhanii nama biyya bulchu wallaalleerra jedhan.
Godinuma Horo Gduru Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhuguma Mikaa’el jedhamu kan duraa hidhame obbo Mikaa’eel dhaabaa ilmi isaanii sababaa tokko malee halkan manaa fudhatamuu isaa ibsanii mootummaan hidhamtoonni haa hiikaman jedha nu biraa garuu nama mana hidhaatti guru jedhaniiru.
Itiyoophiyaan Miseensota Paartilee Siyaasaa Hanga Tokkoof Dhiifama Gochuuf Ka Jirtu Ta’uu Beeksiste
Koriyaan Kaabaa Marii Sadarkaa Ol aanaa Geggeessuuf kan Kooriyaan Kibbaa Gaafatte Simatte
Balaan Baarura Imaltootaa Afrikaa Kibbaa Lubbuu Galaafate